———၊ ကိုထက် ၊——— ကယ်လိဖိုးနီးယားမှာနေထိုင်တဲ့ ထရေစီဖရန့်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကတည်းက သူ့အပေါ်နှုတ်ခမ်းမှာ ပန်းရောင်အစက်လေး ဖြစ်နေတာကို သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ဒီအစက်လေးကို ၀က်ခြံလို့ထင်ပြီး မစိုးရိမ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီဝက်ခြံလေးက ပျောက်မသွားဖူးဆိုတာကိုတော့ သတိထားနေမိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ သူရဲ့ပန်းရောင်အစက်လေးက အနီရောင်အဖုအဖြစ် ပြောင်းလာတဲ့အတွက် ဖရန့်ဟာ...
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. အသက် ၄၀ ထဲ ၀င်လာချိန်မှာ သူငယ်ချင်းအများစုက ကိုလက်စထရောတွေ များနေကြပါတယ်။ အဲဒီလိုမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုစားသောက်နေထိုင်သင့်ပါသလဲ။ A. အခုမြန်မာပြည်မှာ ကိုလက်စထရောများတာနဲ့ ကင်ဆာတွေ အရမ်းအဖြစ်များပါတယ်။ ကျန်းမာရေးက ဘ၀မှာ...
———၊ ကိုထက် ၊——— တက်တက်ကြွကြွနေပြီး ထိုင်တဲ့ကြာချိန်ကို လျှော့ချတာကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်နှုန်းကို လျော့ကျစေနိုင်ကြောင်း လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူအများစုဟာ တီဗီကြည့်တာ၊ အလုပ်စားပွဲမှာထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်တာ၊ အင်တာနက်သုံးတာ စတဲ့ အလုပ်အများစုကို ထိုင်ပြီးလုပ်ရင်း အချိန်ကုန်ဆုံးတတ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ အနည်းဆုံး...
တူညီသော အကြောင်းရင်းခံ ကင်ဆာများနှင့် အိမ်ထောင်ဦးစီးတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု သမားတော်ကြီး) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ ရွှေရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ကင်ဆာအများစုမှာ တူညီတဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒါတွေက ဘာတွေပါလဲ ဆရာ။ A. ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားရတဲ့ အဓိက အခြေခံအကြောင်းရင်း...